Falaqayn Doorashada Maanta ka dhacaysa Waddanka Ingiriiska - somalilandlivemedia
Falaqayn Doorashada Maanta ka dhacaysa Waddanka Ingiriiska
9:23 8. June 2017
Berri UK waxa loo ga dareeri doonaa doorasho guud oo lagu dooran doonaa dawlad cusub oo dalkan ka dhalata si ay uga shaqayso ammuuro culculus oo masiiri ah sida ka bixista UK ee Midawga Yurub.
Waxa doorashadan dhegta u taagaya adduunka oo dhan; gaar ahaan Midawga Yurub, waddamada khaliijka, dunida saddexaad iyo dalka Maraykanka. Sababta ugu weyn ee mandaqadahani ugu dheg taagayaan doorashada UK waa :-
1. Yurub oo UK ka baxday waxa u yaal kala gurasho amma quuddarrayn naawilaad isku soo noqosho ah haddii axsaabta qaar ku guuleystaan sida Liberal Democrats oo aad u liita dhinaca taageerada. Labada xisbi ee dalkan ugu waaweyn (Conservative & Labour) ayaa ku kala duwan sida Yurub loo ga baxayo. Midawga Yurub waxa u dan ah in xisbiga shaqaaluhu (Labour Party) ku guuleysto doorashadan.
2. Dalalka Khaliijka iyo dalka UK aad ayey isugu xidhan yihiin dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha, waxa ka dhexeeya mashaariic aad u waaweyn oo dhinaca maalgashiga ah, isku gudub dhanka dalxiiska ah iyo wadaagis dhinaca siraha ah. Dalalka Khaliijku waxa ay aad ugu niyadsan yihiin oo u roon xisbiga hadda talada haya ee Theresa May (Conservative Party). Sababtuna waa in UK ay madaxa u salaaxdo Imaaraadka iyo Sucuudiga. Inkasta oo Qatar ay aad UK u maalgalisay gaar ahaan London.
3. Dunida saddexaad UK waxa ay siisaa deeq lacageed oo dhan $17.3 oo dollar. Haddii xisbiga shaqaaluhu yimaado lacagtani in ay is dhinto ayey aad ugu dhawdahay. Waayo waxa uu xisbigu ballanqaaday in uu gudaha wax badan maalgalin doono.
4. Dalka Maraykanku il aad u weyn ayuu ku eegayaa doorashada UK, waxana uu aad uga werwersan yahay in uu xisbiga shaqaaluhu ku guuleysto doorashada. Waxa ugu weyn ee uu walaaca ka qabo dalka Maraykanku waa in Jeremy Corbyn uu aad uga soo horjeedo in UK iyo US ay wax walba iska xulufaystaan, isla markaana UK ay iska daba-gasho US.
Dhanka kale in uu rabo in dhammaan dalalka Nuclear-ka haysta uu kala xaalo baabi’inta Nuclear ka. Waxa kale oo uu kaga feker duwan yahay US qaddiyaddaha Masar, Suuriya iyo Falastiin.
Ugu danbeyn, berrito ayey dadka reer Britain go’aan rasmi ah ka gaadhayaan cidda hoggaaminaysa UK shanta sano ee soo socda. Axsaabta dalkan ayaa afkaar ahaan aad u kala duwan tusaale ahaan:
1. Xisbiga midigta toosan (Conservative Party) oo ah xisbiga hadda talada haya ee ka saaray UK Midawga Yurub, ayaa waxa siyaasaddiisa ololuhu daaran tahay in Britain si taxadar leh uga baxdo Midawga Yurub, waana halka ay danta dhaqaale ee ugu weyni UK ugu jirta sida uu xisbigu ku doodayo. Siyaasadda dhaqaale ee fekerkani dabada ku hayaa waa (Right Wing Conservatism).
2. Xisbiga shaqaaluhu (Labour Party) waxa uu aaminsan yahay in siyaasadda dawladdu la wareegto qayb ka mid ah baananka, gaadiidka gaar ahaan tareennada, isla markaana lagu ilaaliyo caafimaadka waddanka gacanta dawladda (NHS Command Policy). Fekerkan ayaa ah mid UK ay hore u isticmaashay 1971 nasiib-darro-se wakhtigaa guul-darraystay waxa dhaqaale ahaan lagu yidhaa (Command Economy).
3. Xisbiga xorriyaadka dimuqraadiga ah (Liberal Democrates) waxa uu isagu doorkan soo bandhigay in haddii uu doorashada dalkan ku guuleysto uu mar labaad dadka reer Britain uu fursad u siinayo hafti ay ku doortaan in ay dib ugu noqdaan Midawga Yurub. Arrintaasi se uma muuqata in dhegaha dadka ay ka daadageyso.
4. Xisbiga cunsuriga ah ee UKIP ayaa isaga ololaha doorkan ugu weyni uu yahay in Islaamka gacan bir ah la isaga qabto oo shuruucda dalkan wax weyn laga beddelo.
5. Ugu danbeyn xisbiga qoomiga ah ee SNP oo u ololeeya in Scotland UK ka baxdo horena ugu guul-darreystay ayaa mar labaad ballanqaaday in haddii uu guuleysto hafti danbe laga qaadi doono Scotland. Xisbigu waxa uu ku dacwiyayaa in Scotland aaney rabin dadkeedu in ay ka baxaan Yurub se laga itaal roonaaday.
Si kastaba ha u dhacdo e, doorashada berri ee UK ma aha mid sahlan, waana ay ka duwan tahay kuwii hore uga dhici jiray. Waayo ammuuro masiiri ah ayaa horyaal maanta oo u baahan in go’aanno aad loo ga fiirsaday laga gaadho.
Halkan Ka Daawo Xaflad balaadhan oo xisbiga waddani ku qabsaday Dalka Emaratka Magalaada Dubai
Musharax Cirro Oo Ugu Baaqay Wax-garadka Somaliland In Ay Ka Qayb-qataan Nabadaynta Ceel-afweyn Vidoe
Prof:-Axmed Ismaaciil Samater Oo Sheegay In Xisbiga Gabalkiisi Dhacay Ee KULMIYE Ay Laba Beelood Shuraako Ku Yihiin Video
Newer PostMaayarkii Cusbaa Ee Saylac Iyo Xubnihii Taabacsana Oo Xabsiga Lagu Guray
Older Post Hooyo Danyar Agoon Ah Oo Gabadh Ay Dashay Uu Magafe Ka Haysto Oo Deeq Lacageed La Soo Gaadhsiiyey Video